प्रदेश ५ – Page4– Pahilo Page
दाङमा हृदयविदारक घटना, जीप दुर्घटनामा बेहुलाका आमाबुवासहित ६ जनाको मृत्यु
दाङ, २७ मंसिर । विवाहको जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा दाङमा बेहुलाका आमाबुवासहित ६ जनाको मृत्यु भएको छ । लमही नगरपालिका वडा नम्बर ९ रिहारनजिक स्कारपियो र बस ठोक्किएपछि ६ जनाको मृत्यु भएको हो । उक्त दुर्घटनामा अन्य २ जना घाइते भएका छन् । चितवनको गीतानगरबाट बाँकेको शम्मेरगञ्ज फर्कदै गरेको बा १२ च ३१२२ नम्बरको स्कारप...
विकट गाउँमा बाटोको ट्रयाक खोल्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
तुलसीपुर, २६ मंसिर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विकट वडाहरुमा बाटोको ट्रयाक खोल्ने कामलाई पछिल्लो समय तीव्रता दिएको छ । विकास निर्माणका गाडीहरु खरीद गरेर उपमहानगरपालिकाले विकटका वडामा बाटो पुर्याउनुका साथै साँघुरो बाटोलाई पनि फराकिलो पारिरहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले विकट वडाहरु १, ३, ४ र १३ का विभिन्न ...
प्रदेश नं. ५ को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ
बुटवल, २६ मंसिर । प्रदेश– ५ को प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ भएको छ । अघिल्लो अधिवेशन सकिएको करीब चार महिनामा हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको हो । कानून निर्माणमा केन्द्रित हुने भनिएको यो अधिवेशनका लागि सरकारले १५ भन्दा बढी विधेयक स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यस्तै, चारवटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । बैठ...
दाङ, २३ मंसिर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले निवृत्त कर्मचारीहरु अनुभवका खानी भएकाले उनीहरुबाट धेरै ज्ञान लिनुपर्ने बताएका छन् । निवृत्त राष्ट्रसेवक समाज शाखा कार्यालय तुलसीपुर दाङको चौथो अधिवेशन तथा १०औं वार्षिक साधारण सभाको शनिबार तुलसीपुरमा उदघाटन गर्दै नगर प्रमुख पाण्डेले यस्तो धारणा राखेका हुन...
दाङ, १५ मंसिर । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १७ झिंगैका रणबहादुर ओलीको स्मृतिमा श्रद्धाञ्जलीसभा सम्पन्न भएको छ । उनको निधन भएको १३ औं दिनमा नेकपा वडा समितिको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो । प्रमुख अतिथि नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं ५ नम्बर प्रदेश सचिव जगप्रसाद शर्मा ‘अपार’ले पार्टी एकतालाई संस्थागत गरेर सरकारका कामकाज ...
तुलसीपुर उपमहानगरले लगायो भैलोमा जथाभावी गर्न रोक
काठमाडौ, १९ कार्तिक । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले देउसी भैलोका नाममा जथाभावी गर्न रोक लगाएको छ । उपमहानगरको ४६ औं बैठकले त्यस्तो रोक लगाएको हो । देउसी र भैलोको नाममा हुने गरेका विभिन्न अनियमितता र विकृतिहरुलाई नियमन गर्ने निर्णय पनि उपमहानगरपालिकाले गरेको छ । बैठकले ठूलो आवाजमा गीत बजाउन, घरधनीसँग बलजफ्ती पैसा माग्न, ...
पत्रकारको क्षमता विकासका लागि पहल थाल्छु: सांसद केसी
दाङ, १३ कार्तिक । प्रतिनिधिसभा सदस्य हिराचन्द्र केसीले पत्रकारहरुको क्षमता विकासको लागि पहल थाल्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) दाङको कार्यालयको मंगलबार निरीक्षण तथा अवलोकन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । दाङ क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित सांसद केसीले कार्यालयको जग्गा, भवन तथा प्रवाह हुने सेवाको बारेमा जानकारी...
दाङमा समातिए ३८ जना जुवाडे, ५ लाखभन्दा बढी बरामद
काठमाडौं, १० कार्तिक । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले गत असोज २ गतेदेखि कार्तिक १० गतेसम्म जुवातास विरुद्ध सञ्चालन गरेको अभियानका क्रममा जम्मा ३८ जना जुवाडेहरु पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक रामप्रसाद घर्तीमगरका अनुसार जुवाडेहरुबाट जम्मा ५ लाख २९ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ बरामद गरिएको ...
पन्ध्र वर्षपछि डाँगीको अन्त्येष्टि
बाँके, १६ असोज । पन्ध्र वर्षअघि अपहरणमा परेका लालबहादुर डाँगीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी लडाकुको अपहरणमा परेका डाँगी शान्ति प्रक्रियापछि पनि घर फर्किनुभएन । परिवारले उहाँ आउने बाटो कुर्न भने छाडेनन् । पन्ध्र वर्ष बित्यो डाँगी फर्किनुभएन । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयाका डाँगी पर...
फेरि घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति भयो ?
दीपेन्द्रले गरे सेनिटाइजर सहयोग
कुम्भ राशि भएका व्यक्ति कति प्रतिशत स्वार्थी ?
राजधानीमा देखियो सस्तो प्याज किन्ने उपभोक्ताहरुको यस्तो लर्को
संघीयताले देखायो रमिता : राजमो केन्द्रीय सदस्य थापा